musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » India ikozvino yakavhurika yevakazara vachengeti vekunze vashanyi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • India Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Ino inguva yekutanga India ichibvumidza vashanyi vekunze kupinda munyika kubva munaKurume 2020 payakamisikidza kukosheswa kwayo kwekutanga kwenyika.
Vakadzivirira zvizere vashanyi vekunze vanofamba nendege dzakabhadharwa vakatendera kupinda kuIndia kutanga nhasi.
Vafambi vekunze kune dzimwe nendege vanokwanisa kupinda muIndia kutanga munaNovember 15.
Hazvina kujeka kana vashanyi vanosvika vachizofanira kugara kwavo vega asi vanofanirwa kubaiwa jekiseni zvizere uye kuyedza vasina hutachiona mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekubhururuka kwavo.
Vashanyi vekunze vanobvumidzwa kupinda India zvakare, kekutanga kubva munaKurume 2020, apo nyika yakamisikidza yavo yekutanga nyika COVID-19 kukiya.
Mukuzorora kwazvino kweayo COVID-19 curbs, Vakuru vehurumende yeIndia yakazivisa nemusi weChishanu kuti nyika yakavhurwa kuzadza vachengeti vekunze vashanyi vanofamba nendege dzakabhadharwa.
Vafambi vekunze kune dzimwe nendege vanokwanisa kupinda India kutanga kubva munaNovember 15, vakuru vakawedzera.
Hazvisati zvajeka kana vashanyi vanosvika vachizofanira kugara voga mukati India, asi vanofanirwa kubaiwa jekiseni rakazara uye kuyedza vasina hutachiona hwe COVID-19 mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekubhururuka kwavo.
Sarudzo yekuvhurazve nyika, yakaziviswa kutanga kwemwedzi uno nebazi rezvemukati muIndia, inouya apo hutachiona hweIndia hwezuva nezuva hwadzikira pasi pe20,000 kubva pamusoro pe400,000 muna Chivabvu uye vanhu vazhinji vakabayiwa jekiseni.
India yakapa mishonga inopfuura 970 miriyoni yekudzivirira. Vanoda kusvika makumi manomwe kubva muzana yevakuru vanokodzera vanhu vanga vaine kana imwe chete dosi.
Kurerutswa kwezvirambidzo kune vashanyi vekunze vanoshanyira nyika, zvisinei, zvinowirirana neyevashanyi vekuIndia epamba uye mwaka wemhemberero. Izvozvi, zvave kukonzera kusagadzikana nevakuru vehutano avo vayambira pamusoro pekusagadzikana.
Pakutanga kwemwedzi uno, Indian Council of Medical Research, mutungamiriri wekutanga wezvekurapa muIndia, akayambira kuti "kutsiva kushanya" kunogona kutungamira mukuwedzera kwehutachiona hwe COVID-19 kana vashanyi vasingateedzere zvakanyanya zvirevo zvekuchengetedza.
Sekureva kwedhata repamutemo, vashoma vanopfuura mamirioni matatu evashanyi vekunze vakashanyira India mu2020, yaive dipu yeanopfuura 75 muzana zvichienzaniswa ne2019.